सुतेका बेलासमेत ‘मलाई न’मार्नुस्’ भन्दै चिच्याउँछन् रुकुम घटनाका घाइते – Sandesh Munch
भेरी नगरपालिका–४ का सुदीप खड्काको शारीरिक चो ट विस्तारै ठीक हुँदैछ । टाउको, काँध, हात, पिँडुला, ढाड सबैतिर चो ट छ तर त्यो चो ट विस्तारै सञ्चो हुँदै गइरहेको छ । बेलाबेला घटनाको पी डा र त्रा सले सताइरहेको छ । कहिलेकाहीँ घटना सम्झेर उनी झस्किरहेका छन् ।
भेरी नगरपालिका–४ का नवराज विकसहित छ जनाको ज्यान जाने गरी गत जेठ १० गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारी–८ सोतीमा भएको घटनामा सुदीप घाइते भएका थिए। उनीसहित १२ जनाले बल्लतल्ल ज्यान जोगाउन सफल भए तर मरणासन्न हुनेगरी पि टिए । सुदीपलाई प्रहरीले उद्धार गरी मिसन अस्पताल लगेको थियो । त्यहाँ उनलाई सकसपूर्ण दुई रात बिताउनुप¥यो । घाउ पूरा निको नभए पनि उनी त्रा सकै कारण घर फर्किनुप¥यो । प्रहरी, सञ्चारकर्मी र अन्य आफन्तले के भएको हो ? कसरी घटना भयो ? सोधेर हैरान पारेपछि आफू घर आएको सुदीपको भनाइ छ । बेलाबेला उहाँलाई त्यही नवराज लगायतका साथीहरूले बचाउ बचाउ भनेको आवाज कानमा गुञ्जिरहन्छ ।
‘सुतेका बेलासमेत मलाई न मा र्नुस् भन्छ,’ मदनकी आमा लक्ष्मी शाहीले बताइन् । सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लगेर शारीरिक र मा नसिक समस्याको उपचार गर्ने सोच भए पनि आर्थिक अभावले कतै लैजान नसकेको उनले बताइन् । घरी पुलिसले बोलाउँछ, घरी युट्युबर लगायत आउँछन्, बोलाउँछन् । ‘थरिथरिका मान्छेलाई कति बयान दिनु ?’ लक्ष्मीले भनिन, ‘अहिले पनि छोरो डराइरहेको छ ।’ आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
Prevराती १० देखि बिहान ५ बजेसम्म हिँडडुल गर्न रोक, १५ भन्दा बढी भेला हुन नपाइने
Nextउपत्यका छिर्ने नाकामा पैदलयात्रीलाई समेत कडाइ !